Ao Kildare Village no toerana itoeran'ny toeram-pivarotana lafo vidy, eo anelanelan'ny tany feno ala mahafinaritra, adiny iray monja miala an'i Dublin. Ho hitanao fa sarotra ny manohitra fakam-panahy amin'ny butikety 100 avy amin'ny mpamorona manintona indrindra manerantany, izay manolotra hatramin'ny 60% amin'ny vidin'ny fivarotana atolotra anao.
Kildare Village dia iray amin'ireo toerana fivarotana lafo vidy 11 ao amin'ny The Bicester Village Shopping Collection manerana an'i Eoropa sy Sina, adiny iray na latsaka avy amin'ny tanàna malaza eran-tany. Jereo ny trano fisakafoanana malaza, serivisy mpiambina, fandraisana vahiny kintana dimy ary tahiry mahavariana.
Kildare Village dia miala ny M7 ao amin'ny Exit 13 latsaky ny adiny iray avy any Dublin. Mandehana ary mankafiza fijanonana maimaimpoana na raiso ny serivisy fiaran-dalamby maharitra 35 minitra miainga amin'ny antsasak'adiny avy eo amin'ny Station Heuston an'i Dublin. FITSIDIHANA IrishRail.ie ho an'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny ora fiaran-dalamby sy tolotra manokana. Avy eo amin'ny gara Kildare, mitsangatsangana amin'ny bus fitateram-bahoaka Kildare Village maimaim-poana izay mihaona amin'ny lamasinina rehetra fito andro isan-kerinandro. Ny bisy fitateram-bahoaka dia manompo ny zaridainan'i National National Stud Gardens sy ny tranombakoka Horse imbetsaka isan'andro.
fiantsenana, Andro orana, trano fisotroana kafe, Kildare
Làlana Nurney, County Kildare, R51 R265, Irlandy.
Tsidiho ny tranokala mandritra ny ora fisokafana vanim-potoana. Andro Krismasy mihidy.